Laser Collimator Lens, Inotenderera Lens, Optics Laser Vagadziri uye Vatengesi muChina
Tsanangudzo:Laser Collimator Lens,Inobatanidza Lens,Optics Laser,Kuwedzera Chiedza,,
 HomeProductsLaser Collimator Lens
Laser Collimator Lens (Total 16 Products)
Zvigadzirwa zve Laser Collimator Lens , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Laser Collimator Lens , Inobatanidza Lens vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Optics Laser R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, imwe girazi lens dhizaini. Iyi imwechete lenzi inopa kwakatenderedza 15-20% kuwedzera mune zvinobuda zvichienzaniswa ne3-element lenses ine kudzikiswa kwemhando yedanda. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe...
G2 lens ndiyo sarudzo yakanakisa yemapfupi mitsara, semuchina wekunyora. Iyo G2 lens ndeimwe chete lens inogonesa iyo yepamusoro simba rechokwadi reraser diode yekukurumidza yekukurumidza-renji kupisa uye kunyora. Kubatsira kweG2 lens ndeye 95%...
M14x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Imwe girazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 14mm x 0.5mm tambo, 8mm kureba, ndarira EFL (Inoshanda Focal Kureba): 15.18mm CA (Bvisa Aperture):...
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Maviri magirazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Zvinhu zviviri; Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 10mm kureba, ndarira EFL (Inobudirira Focal Kureba): 9.8mm CA (Bvisa Aperture):...
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Maviri magirazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Zvinhu zviviri; Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 8mm kureba, ndarira EFL (Inoshanda Focal Kureba): 6.5mm CA (Bvisa Aperture): 5mm...
M8x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, imwe girazi lens dhizaini. Iyi imwechete lenzi inopa kwakatenderedza 15-20% kuwedzera mune zvinobuda zvichienzaniswa ne3-element lenses ine kudzikiswa kwemhando yedanda. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe...
G8 lens ndeyehurefu hwakatarisa hwakareba imwechete chinhu girazi lens ine Broadband AR 400-700nm yekupfeka. G8 lens ine 90% yekupasa kushanda. G8 lens yakanakira kucheka laser. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya...
M7x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Maviri magirazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete; Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 7mm x 0.5mm tambo, 7.5mm kureba, ndarira EFL (Inobudirira Focal Kureba): 4.42mm CA (Bvisa...
G8 lens ndeyehurefu hwakatarisa hwakareba imwechete chinhu girazi lens ine Broadband AR 400-700nm yekupfeka. Iyo ine 90% yekupasa kushanda. Zviri rakanakira Laser nokuveza. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete; Coated Manyiminya girazi...
China Laser Collimator Lens Vatengi
Kupfeka kwe405nm 450nm 505nm 515nm 532nm 638nm 650nm 780nm 808nm 980nm, ect
Laser Collimator Lens Inobatanidza Lens Optics Laser Kuwedzera Chiedza Collimator Lens